Yuhuudu maxay iga aamusan tahay madax banaanida gobolka Katalan Kurdigana uga hadashaa - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Yuhuudu maxay iga aamusan tahay madax banaanida gobolka Katalan Kurdigana uga hadashaa
Yuhuudu maxay iga aamusan tahay madax banaanida gobolka Katalan ee dalkaasi Isbayn Kurdiyiintana u taageertay markey qabsadeen afti buga oo aan ka matalin dadka Kurdiyiinta.
Bishii hore ayay ahayd markii Kurdiyiinta oo aad loogu amaanay sida fiican ee ay uga hortageen argagixisada gaalaynta Muslimiinta ee Daacish ay kibir ka qaadeen kuna dhawaaqeen afti ayna dawladu ogeyn.
Kurdiyiinta oo Yuhuuda kaliya taageero ka haysta ayaa qabsadey afti ayagoo taagaya calanka Yuhuuda. RW Yuhuuda ayaa taageeray balse waxa la is waydiinayaa waxay uga aamuseen gobolka Katalan ee Isbayn ee hadda ku dhawaaqay madax banaani laakiin loo diidan yahay.
Ujeedada uGu wryn ayaa in Yuhuuda ka baqayso in Yurub soo dareeriso Yuhuuda ku nool kuna soo rogaan cunaqabatayn dhinaca dhaqaalaha ah halka taageerida Kurdiyiinta ay kaga helayso gacan Maraykanka inkastoo Maraykanku ku dhicin inuu gacan u fidiyo Kurdiyiinta.
Yuhuuda ayaa tababaro siisa Kurdiyiinta si ay uga dhigato gabaad weerarka ay la damacsan yihiin Iran. Waxase guula in dhamaan wadamada la jaara ee Kurdiyiintu degan yihiin ayna raali ka ahayn Yuhuud iyo Kurdiyiin madax banaani qaata.